dnScoop भन्छ dnScoop.com वास्तव मा केहि मूल्य छैन | Martech Zone
मंगलवार, फेब्रुअरी 27, 2007 मंगलवार, फेब्रुअरी 27, 2007 Douglas Karr
हारून दर्साउँछ कि dnScoop.com, अन्य मूल्यांकन इञ्जिनहरू जस्तै बेकारका छन्।
तिनीहरूलाई विश्वास गर्नुहुन्न? मात्र सोध्नुहोस् dnScoop कति dnScoop.com लायक छ ... विडंबना, तिनीहरू सहमत छन्:
हुनसक्छ यो केवल म नै हो, तर मैले यो कोडलाई ओभरराइड गरिसक्छु कि यो $ 500k को मूल्य हो।
मार्स 2, 2007 मा 10: 50 एएम
म ती मूल्य साइटहरूबाट लात लिन्छु। यो दिन मलाई लाग्दैन कि डोमेन नामले साइटमा एक मूल्य राख्न सक्छ।
मार्क्स 3, 2007 मा 12: 43 PM
पर्याप्त चाखलाग्दो, म dnscoop गए, र मेरो साइट worth 64,480 को अनुसार उनीहरूको अनुसार छ। यदि मैले त्यो नम्बर लिएँ र यसलाई साइटको आयबाट विभाजन गर्छु भने, २. years बर्षमा बनाउने यदि हालका सर्तहरू प्रबल छन् भने (जुन म निश्चित छु सुधारको लागि जारी रहनेछ)। तर यो एक राम्रो अनुमान छ जसले तपाईंलाई तपाईंको साइट अझ राम्रोसँग मूल्यांकन गर्न मद्दत गर्दछ। कुनै खरीददार ??? 😉
अप्रिल 16, 2007 मा 11: 27 PM
DNScoop एक जस्तो देखिन्छ http://www.smartpagerank.com, र यो त्यो मा एक खराब हो। तिनीहरूले वेबसाइट ट्राफिक चोर्नको लागि अण्ड-हन्ड रणनीति प्रयोग गर्छन्! कृपया यसलाई अझ राम्रो व्याख्याको लागि पढ्नुहोस्: http://www.dnscoopsucks.com/
अप्रिल 19, 2008 मा 8: 14 एएम
तर तपाईले मान्नु पर्छ अक्सर मानौं राम्रो लाग्दछ। जस्तै मलाई शंका छ कि कोहीले मेरो साइट को लागी $ २०K दिन्छ, तर यसले भन्छ कि यो धेरै मूल्यवान छ।
यो धेरै उच्च मान दिन्छ तब अन्य धेरै सेवाहरू गर्दछ।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०16 बिहान
नमस्ते! मैले धेरै त्यस्ता वेबसाइटहरू देखेको छु जुन नि: शुल्क प्रतिस्पर्धी विश्लेषण प्रदान गर्दछ। मेरो व्यक्तिगत मनपर्ने छ "लक्ष्य =" _ रिक्त ">http://www.estimix.com । यसले धेरै सहि यातायात जानकारी पनि उत्पन्न गरेको देखिन्छ।